बागलुङ शिसाखानी मेडिकलमा मासिक रुपमा विशेषज्ञ सेवा सुरु – MeroJilla.com
बागलुङ शिसाखानी मेडिकलमा मासिक रुपमा विशेषज्ञ सेवा सुरु
बागलुङ । शिसाखानी मेडिकल हल बडिगाड गाउँपालिका वडा नं. २ हाँडिखोलाले विशेषज्ञ डाक्टर सहितको सेवा सुरु गरेको छ। मेडिकलले विरामीहरुको लागि निशुल्क सुगर परीक्षण गर्दै सो सेवाको सुरु गरेको हो। प्रत्येक महिना कम्तिमा एक विशेषज्ञ डाक्टरको सेवा दिने जनाएको मेडिकलमा शनिवार मेट्रोसिटि हस्पिटल पोखराका जनरल फिजिसियन डा. सचिन ढकाल, ल्याव टेक्नोलोजिष्ट सुमन वुढा लगाएतको टोलीले स्वास्थ्य जाँच गरेको थियो।
कार्यक्रममा सय जना भन्दा वढिको सुगर परिक्षण तथा अन्य परिक्षण गरिएको हेल्थ असिस्टेन्ट तथा डिफार्मासिस्ट विष्णु भुजेलले जानकारी दिनुभएको छ। अव हरेक महिना विशेषज्ञ डाक्टर ल्याउने तथा जेष्ठ नागरिक तथा गर्भवति महिलालाई छुट सहित सेवा संचालन गर्ने मेडिकलले जनाएको छ। उद्घाटन कार्यक्रममा समाजसेवी सुनिल शेरचन, रत्न वहादुर क्षेत्री, डा. सचिन ढकाल लगाएतले वोल्नुभएको थियो। सो अवसरमा स्थानिय आमा समुहले डाक्टर सहितको समुहलाई स्वागत तथा सम्मान गरेको थियो।